Ezimweni ezihlukahlukene kungase kudingeke ezivikela. I elula kunazo futhi icwecwe ithuluzi - a ibhokisana lokugcina itiye noma ikhofi igesi. Kuyinto esitsheni esincane metal egcwele izidakamizwa esebenzayo (okuthiwa ecasulayo) kanye propellants kuthiwa Umfutho. Ezinye spray pepper ngenhloso yokuzivikela kungcono? Zama ukuqonda izici zabo.
Zonke cartridges igesi uhlobo oluhlukile lomcebo asebenzayo futhi indlela sputtering. Kungasetshenziswa ngokugcwalisa isisi esikhalisa unyembezi, okubangela ngaphandle lacrimation, ukushiswa nokuphangwa namanje nasopharynx, akhiphe pepper ashisayo noma Analogue zokwenziwa of pelargonic acid morpholide (IPC). It kubhekwa indlela ephumelela kunazo zonke pepper kanye lonke kancane.
Ezinye spray pepper ngenhloso yokuzivikela kungcono? Ukuze uqonde lokhu, udinga ukucacisa uhlobo - fafaza noma isifutho-jet. Futha izindlela zinhle ngalolo ketshezi olufuthwe ifu, kanjalo zakha isimiso umgubuzelo phakathi kwalabo wahlaselwa futhi labo bavikela. ifu Yande ngokushesha kuziwa ufinyelele umgomo wakho kunalokho jet kusukela isilinda. Ngakolunye uhlangothi, aerosols ngokushesha asakazwa umoya, ngakho kakhulu anciphise umgamu wawo. Inkjet amasilinda efanayo zenzelwe ukuba hit ngokunembile esweni. Ngakho, ama-ejenti enjalo kuhluke ukunemba futhi kungenzeka kwesicelo kuhlanganise esikhaleni avalelwe. Kodwa eqinisweni izinhlobo igesi cartridges inqwaba, futhi sizobe kubhale ngezansi.
Indlela ukukhetha spray pepper ngenhloso yokuzivikela? Kufanele uqhubeke kusukela usayizi edingekayo:
25 ml - kuba amathini kulencane ukuthi kulula ukuba afihle, ngisho ephaketheni lakho. Nokho, izindlela ezifana kwanele uhlelo lokusebenza olulodwa noma ezimbili.
65-75 ml - kuyinto cartridges jikelele ukuthi kalula ukulingana esandleni, kodwa ayisekho iqukethe ejenti asebenzayo.
100-650 ml - a cartridges besiyoba sikhulu ukuthi ingagcinwa ekhaya noma ukuthatha nawe emotweni.
Kunezinhlobo ezahlukene sputtering igesi cartridges ngenhloso yokuzivikela. Yikuphi okungcono? Guest, uma uzithatha njengesisekelo, ukugcizelela yokuthi indlela ngayinye has izici zayo siqu wokusebenza:
Lapho kumiswa spray aerosol is ifu ebanzi lapho ngempumelelo okufinyelela enhlosweni. Phakathi izinzuzo zindlela abasebenzisi babika contact endaweni ebanzi, imiphumela emihle lokuphefumula, kungenzeka ngokusebenzisa kuhlasela iqembu labantu ngenxa ukwakheka kwesihenqo igesi. ejenti enjalo ingase isetshenziselwe at ibanga kwamamitha nenxenye.
Aerosol spray-jet - kukho enemisebenzi ngenxa ibala kancane futhi contact kwabantu mkhulu yokugcwalisa isitsha. Kusho ibhaluni kungenzeka wafutha at ibanga 2 m.
Isifutho jet isetshenziswa endlini, njengoba kungekho nomphumela zokuphefumula. Ukuthandwa inkjet cartridges ngenxa ezahlukene ngempumelelo - kuze kufinyelele 3 m.
Lapho kumiswa kephunkephu ewumngcingo spray jet, okuyinto nabo ubuso uvala up iso. Sebenzisa Foam ejenti kungenzeka ngaphakathi endlini. Wafutha at ibanga 2.5 m.
Futha Gel eyenani kwentuthuko yesimanje. Izimali kuhluke isakhiwo uqweqwe viscous, ngakho uma hit nabo iso kunzima ugeze off. Zokuphefumula akunamthelela, ngakho ingasetshenziswa ngaphandle ngisho imimoya enamandla.
Ukuze ubone spray pepper ngenhloso yokuzivikela kungcono, udinga ukuza ngokuyinhloko kusukela degree of ukusebenza kokwakhiwa. Futhi unesibopho lokuhlushwa izithako ezisebenzayo. Thina zibalwa izimali phezulu, kuye ngokuthi lingakanani yabo namandla. Ake uqale nge amamodeli compact kakhulu.
Black 25 kanye "Black Lady"
Negesi cartridges lolu phawu-jetting aerosol spray. Ingasetshenziselwa ngisho izimo ezinomoya libhekene ububanzi anda. Sebenzisa isifutho ikani ngaphandle kuhloswe. Umklamo elula has usayizi encane kakhulu, kalula esifanelana esandleni sakho kanye ephaketheni lakho. Ukwakheka amathuluzi - lawa amabili isisi esikhalisa unyembezi kakhulu, kuhlanganise akhiphe engokwemvelo pepper ashisayo. Sebenzisa okuqukethwe igobolondo igesi kungaba njengoba kancane njengoba 3 imizuzwana. Umkhawulo jet ejection - 2 m.
"Eshisayo pepper" (25 ml)
Isilinganiso gas amasilinda ngenhloso yokuzivikela, sifake amathini "Burning pepper." Lokhu engabizi aerosol-uhlobo spray izingoma, lichaza ekwakheni equkethe akhiphe engokwemvelo pepper ashisayo. Ukuze ruble 300 nje, ungakwazi ukuthenga ithuluzi, ngenxa ukusetshenziswa lapho umuntu ulahlekelwa ikhono ukuthatha isinyathelo imizuzu okungenani 5. Ukuze ukuzivikela ibilokhu ephumelela kakhudlwana, kubalulekile ukuba sikwenze at amehlo futhi amavesi acinene umgadli. Ngo oxhumana lelula isikhumba-iphiko ngeke nhlobo.
Universal: Black 65 ml
Ezinye spray pepper ngenhloso yokuzivikela kungcono phakathi onobuhle ezinamandla kakhudlwana? Pepper spray ivolumu 65 ml - yisisombululo jikelele, ngoba kungaba kwenziwe futhi asetshenziswa ngenhloso yokuzivikela. Leli thuluzi has a jetting aerosol-spray, ngakho ungaqiniseka ukuthi spray ifinyelela ilitshe. A ingxube ithuluzi siqukethe zemvelo ezishisayo pepper akhiphe zokwenziwa izinto uvunyelwe ukusetshenziswa eRussia.
"Sword" (65 ml)
Balloon "inkemba" ihlukile ububanzi engafika ku-3 amamitha ukunemba kanye wumoya. Akhiqizwa efektri isiRashiya, it has a usayizi compact futhi kube yindlela elula ukuzivikela. Lokhu yokwakheka jet spray uhlobo, Nokho enikeziwe ngokuchofoza futhi cishe baze jet ezondile ngokunemba high, eshaya abaphikisi at ibanga 3 m.
"Sword" (65 noma 100 ml) kudalwa esekelwe entsha ifomula ezizihluphayo. Ziyakwazi kuyaphumelela futhi abanalo umonakalo kunoma ubani. Kakhulu Ukwakheka ecasulayo kuqinisekisa lacrimation okusezingeni eliphezulu futhi kubangela ubuhlungu obukhulu. Leli thuluzi kungasetshenziswa ukwenza 12 kuhlasela emfushane abaphikisi. Ubude besikhathi - imizuzwana mayelana 6.
"Ithoshi-2" (75 ml)
Lokhu pepper spray amanani aphansi - ruble 300-350 per unit. Ngesikhathi esifanayo e liquid ekwakhiweni yayo izikhathi 4 akhiphe pepper, bese uhla yayo -. Ubuningi 3 m Njengengxenye leli thuluzi lisetshenziswa ketshezi, okuyinto emazweni amaningi isetshenziselwa ngamaphoyisa bamba izaphula-mthetho. Phakathi izinzuzo leli thuluzi, abasebenzisi wazi isichibi contact 65 cm, isikhathi yokusebenza - 3 imizuzwana for ukuthi run 6 ukuchofoza. Sebenzisa "Ithoshi-2" Kunconywa evulekile.
Kukhona ezahlukene ngokusho uhlobo isinyathelo igesi cartridges ngenhloso yokuzivikela. Yikuphi okungcono? Izibuyekezo kungaba ezimweni eziningi kube wabeluleki phezulu okukhethiwe. Ngokwesibonelo, kuleli luhlobo iqukethe kathathu pepper uma ziqhathaniswa analogue. Ukwakheka ezintsha, futhi ngokubona abasebenzisi kanye nochwepheshe, iyona enamandla kunazo phakathi wesimanje igesi amasilinda.
Ibhaluni ine aerosol spray uhlobo, kodwa ikhwalithi nekghono akusho ukuhoxa izindlela jet. Kusekelwe sicashunwa lesitsetfwe pepper zemvelo ezishisayo. Lapho sidingo esiphuthumayo acabangele ovunguzayo isiqondiso, ngakho njengoba ibhodlela uthululela ngokoqobo imizuzwana 5. Ibonisa kahle esiphezulu kusho at ibanga 2 m.
Volumetric futhi enamandla "Ithoshi 2" (100 ml)
A namandla kakhulu intengo igesi igobolondo akuyona ezahlukene kakhulu - iningi aerosol izifutho futhi itholakala ngaphakathi ruble 300-600. igobolondo ezihlangene ine aerosol uhlobo sishaye. Ngenxa yenqwaba, kodwa lalilincane inikeza jet enamandla kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izindlela. Vele 3 imizuzwana esikhathini esiphezulu prime jet isitha. Ikani inikeza ukukhululwa iyashesha futhi inamandla fu aerosol ibanga esiphezulu.
Phakathi amathuluzi anamandla ke ikufakazele ngokwayo ngempumelelo sikapelepele ngenhloso yokuzivikela "pha". It has ukusebenza kahle eliphezulu naphezu lingakanani encane nesisindo ukukhanya. Ithuluzi kubiza ruble 300 kuphela, kuyilapho sihlinzeka izinyembezi-kuyacasula uhla ezinengqondo. Compact usayizi design has a kahle ezicatshangwe, ngakho ukuqeda kungenzeka nolwazi ngokucindezela inkinobho. "Pepper vodka" ingasetshenziswa okwesabisa away izinja. Kuqukethwe ukubunjwa ndaba kubangele esivuthayo okunzima isikhumba ezithinta umgudu wokuphefumula.
Isici esiphawulekayo ibhokisana lokugcina itiye noma ikhofi wegesi - jet enamandla futhi prime luningi ibanga 1-2 amamitha Foam cap has a yenqwaba futhi isikhathi eside uhlala ebusweni, ukushaya omunye futhi lwamafinyila ulwelwesi .. Ikani Foam ingasetshenziswa efulethini, futhi emgwaqweni futhi imoto. Umenzi uncoma ukusetshenziswa zithako ukuze kuvikeleke abantu, izilwane. Ibhaluni ilula ukusebenzisa futhi ayidingi kuhloswe.
"S-360" (100 ml)
abathengi abaningi abanesifiso, lapho ungakwazi ukuthenga sikapelepele ngenhloso yokuzivikela. Ochwepheshe ukweluleka ukuxhumana esitolo pro, imikhiqizo ahlangabezana izinga, ukuphepha kanye nokwethembeka. Kusho "S-360" ungachazwa ukuthi sishaye wenziwa jel ukungaguquguquki uqweqwe okunamathelayo. Ngemva ukuxhumana ubuso ithuluzi ezifana uvala i-ekhaleni, amehlo, ngisho izibuko usesimweni esinjalo ngeke nisindiswe. amafomu ecasulayo ngobuso indawo waqiniswa ububanzi 13 cm.
Lula ukusetshenziswa gel spray ngenxa kungenzeka nomthelela ngempumelelo ngasiphi angle. Ukusetshenziswa "C-360" Kungenzeka kunoma iyiphi sezulu, naphezu umoya futhi kwezulu. Operating Range -. 3 m Kulokhu, ithuluzi ngokwayo ahlotshiswe zezindlu compact, kuba ngokuphelele ngeke lubonakale kuze umhlaseli.
Izindlela enokwethenjelwa kakhulu futhi kaningi isicelo sivikeleke - igesi cartridges. Phakathi yakhula futhi enamandla izindlela phawula ungakwazi "ngena NJENGOBA". Kufanele ibe izindlela ruble angu-800, kodwa kungaba lula ukungethusa, hhayi kuphela abantu, kodwa futhi izilwane ezinkulu nolaka. Thenga kusho ongakwenza ngaphandle izimvume. Njengoba izazi zithi, isifutho yamandla enjalo iqukethe asebenzayo izidakamizwa lokuhlushwa ukuthi lizale futhi uvalo. ukuchayeka enjalo ithuthukisa ngenxa okuqukethwe in the medium of the ukwakheka isitshalo ezikhishwe zemvelo ukuthi kukhona ezingemnandi kakhulu iphunga isilwane. okuhlushwa High kuthinta umbono, okumelwe uphefumule futhi ukhulume olfaction futhi kumvimbela izilwane ubudlova.
Ochwepheshe ukweluleka ukukhetha ikani, kuncike kule mibandela yokusetshenziswa nenjongo yawo. Ngokwesibonelo, njengoba ikhambi ekhaya kungcono ukukhetha namakani Foam levolumu okungenani 100 ml. Ahluke nephephe yamagceke. Ukuze bafake okuqhubekayo nge ofanele igesi compact cartridges afika ku 65 ml. Naphezu lalilincane kahle, zingabantu jikelele kanye wafutha kalula. Okuningi abasebenzisi abanolwazi bathi kungcono ukuba baphathe ezimbili nje amathini izinhlobo ezahlukene isinyathelo - iqoqo ngokunembile wokutakula uma kwenzeka isimo esiyingozi.
Motorboats Maverick FLY: tinkhulumo, izici, ukubuyekezwa, amanani
Indlela ukukhetha ibhayisikili alo? Izibuyekezo kanye Izincomo
Motoperchatki Probiker - nokwethenjelwa induduzo
Longboard: kanjani ukukhetha? Indlela ukugibela longboard?
Indlela ukufaka khweza on a ukushibilika eqhweni? Snowboard okunamathiselwe: Ubukhulu. Izingane snowboards nge Ukubophezeleka
Vasilev uVladimir - Biography nemisebenzi
Beats - lokhu ... inhliziyo isigqi iziyaluyalu - izimbangela. Izimpawu yesifo senhliziyo
'Diabeton' izindlela. Yokusetshenziswa
Cargo Ukuhlanganisa: kungani kunesidingo
"U-Olive Beach" e Gorky Park - isiziba emzini
Umvuthwandaba - ingxenye ezithakazelisayo kakhulu umsebenzi
LCD "Barberry" eduze eMoscow
A uphawu umnotho umyalo ... Isici esiyinhloko emnothweni umyalo
Okufanele ukwenze uma ungazi ukuthi yini okufanele uyenze? iseluleko abathandwayo futhi izindlela eziphumelelayo
Elingenamikhono izingalo - kuba ... Okwakushiwo, izinhlobo nomlando umsuka amajazi izikhali